2016 FIC Shiinaha Carwada Cuntada Caalamiga ah iyo Bandhigga Waxyaabaha ay ka kooban tahay
Bishii Maarso 23-25, 2016 FIC Shiinaha Cunto Caalami ah iyo Carwooyin Carwo ayaa lagu qabtay magaalada Shanghai, Shiinaha. Global Ocean ayaa ka soo qayb gashay bandhigga. Maaddaama ay tahay soo saare xirfadle hydrocolloids ah oo Shiinaha ku leh in ka badan 20 sano, Global Ocean waxay ku tiirsan tahay tikniyoolajiyadeeda horumarsan iyo im ...Akhri wax dheeraad ah »
2015 FIC Shiinaha Cuntooyinka Add Add Cunnada iyo Bandhigga Waxyaabaha ay ka kooban tahay
Bishii Abriil 1-3, 2015 FIC Shiinaha Cunnada Cunnada Caalamiga ah iyo Carwooyinka Carwooyinka ayaa lagu qabtay magaalada Shanghai, Shiinaha. Global Ocean ayaa ka soo qayb gashay bandhigga. Maaddaama ay tahay soo saare xirfadle hydrocolloids ah oo Shiinaha ku leh in ka badan 20 sano, Global Ocean waxay ku tiirsan tahay tiknoolajiyadeeda horumarsan ee wax soo saarka ...Akhri wax dheeraad ah »